သူများတွေပို့စ်တင်လို့ရယ် အီးတုံးတင်လို့မရပါလား ….။ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတုန်း …။
ဆာဗာနတ်က .. ငွေလိုချင်လို့လှည့်စားနေတယ်ထင်တယ်..။
မသိလို့ ဒါလေးနည်းနည်းလောက် မေးပါရစေသဂျီးရေ…. ၂ရက်လောက် ပြန်ရေးသင့် မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ။
ချိတ်ချိုးပါနဲ့ ဂျီးတော်ဖြူရယ်။ သဂျီးက ဘီယာတိုက်မွေးထားတဲ့ ကိုဘေးအမဲသားစတိတ်စားပြီး ရီတီတီလေးဖြစ်တုန်း ကီးဘုတ်နှိပ်လိုက်မိလို့ပါ။ သဂျီးမင်းကလည်း နောင်အပြောအဆို (အပြောအဆိုထက် အစားအသောက်ကို) ဆင်ခြင်ပါ။ စာဆိုရှိတယ်လေ..
သူကြီးရေ…. Group က ပိုစ်တွေ ပျောက်နေတယ်နော် …။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။….။ တော်ကြာ သူများတွေက ကျွန်တော် ဖျက်ထားတယ်ထင်နေဦးမယ်…။
ဟုတ်တယ်ဗျ … Group က ပို့စ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ မသိဘူး …. အမြဲစိမ်းတွေများ ဝင်ဖျက်သွားတာလား …
ပို့စ်တင်တာ အယ်ယာတက်တော့ tab တစ်ခုနဲ့ homepage ကိုသွားတော့လည်း ကိုယ့်ပို့စ်က ပေါ်မှမပေါ်သေးတာ.. ဒီတော့ reload … reload… reload ဆယ်ကြိမ်လုံးလည်း အယ်ယာပဲပေါ်တယ်… မရတဲ့အဆုံး သိတယ်မို့လား သူကြီးကိုပဲ အပူကပ်ရတာပေါ့
သဂျီးဗျိူ့သဂျီး ကျနော်လဲ ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ်
ချာချာ ရေ… ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ်ရင် လမ်းထိပ်မှာ ဆေးခန်း ရှိတယ် ကျန်းမာရေး သွားစစ်လိုက်ပါလား။ ကျန်းမာ သန်စွမ်းရင် ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အားလုံး ကောင်းသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး စရိတ်လိုချင်ရင်တော့ ဖောင်တင်ပေါ့။ တင်ထားတဲ့ ဖောင်တွေ များနေရင် ဖောင်ပြင် ပြီး ပြန်တင်ပေါ့။
ဒါပေါ့ဗျာ အများနဲ့ တစ်ယောက် ကျုပ်လွန်တာပေါ့။
အဲဗျာ .. ကိုယ့်လူအလွန်ဖြစ်သွားတာတော့ ကျုပ်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ thinking way ကတော့akind of literal thinking ပဲ။ ဒါပေမဲ့ negative sign ပြနေတာကခက်တရ်။ အဟတ် အဟတ်
လွန်ဒယ် မလွန်ဘူးဒေါ့ တိဝူး
အဖွားဂျီးဆိုပြီးတွားမလုပ်နဲ့တိချင်ရင်ချမ်းကြည့်
အပေါ်က ဆရာ ဘာတွေရေးထားတာလဲ။ ညဏ်မမှီလို့တစ်ဆိပ်လောက်။
တစ်ဆိပ်ဆိုတာ တစ်အိပ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ တွေးတတ်သလိုသာ တွေးပါ။ ရှင်းပြရင် ရာဇ၀င်ချီလို့ သမိုင်းလှန်နေရမယ်။ တော်ကြာ ဆရာတော် အောင်ပု ရှုပ်တာ လူတွေ သိကုန်မယ်။
ကြွက်မခုတ်သောကြောင်များ ကြက်ကင် ဝက်ကင် ဘဲကင် (လူကင်လည်းပါနိုင်သပေါ့) စားဖို့လှူဒါန်းခြင်းပေါ့ကွယ်။
ရွာသားအပေါင်းရေ သဂျီးက ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို အနုတ်ပေးခံရတာများရင် ဖျက်ပစ်မယ်တယ်။ အဲဒါ ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုလိုက်ပါတယ်။
အင်း အလိမ္မာ စာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဒီနေ့ အင်တာနတ်ခေတ်ကြီးထဲ ပျောက်ကွယ်သွားပြီလားတောင်မ သိ ပါဘူး ဦးကြောင်ကြီးရေ..။
ဟုတ်ကဲ့ သဂျီး လှူရင်ဘာအတွက် ဘယ်ကိုရောက်မလဲ ကျနော်လဲသိချင်တယ် ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ဆိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား
လှူရင်ဒါနအတွက် နတ်ပြည်ရောက်မယ်လေ ချာတူးရဲ့။ ဘာသာရေးအသိအမြင် ဒီလောက်တောင် ခေါင်းပါးရသလားကွဲ့။
အနုတ်က ပေးချင်တိုင်း ပေးလို့ရဘူး။ ကွန်နက်ရှင် လိုင်းတူက တယောက် ပေးပြီးရင် ထပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ဒီတော့ ဆန္ဒ အမှန် ဖော်ထုတ်ပေးလို့ မရပါ။
၆၂ သန်းကိုတောင် လက်တဆုပ်က Control လုပ်တာကိုတောင် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ဖြေသိမ့်နေကြသေးတာပဲ အမှား ၁၀၀ အမှန် ၁ယောက် က ဘာလို့ မကျေနပ်နိုင်ရမှလဲ။ ကျေနပ်သဗျား။ ဖော်ပင်လို့ခင်ဗျားဖော်ပင်နေတယ်လို့ ပြောရင် ကျေးဇူးမတင် ပါးရိုက်တတ်တာ လူ့ သဘာဝပဲ။ ကျုပ်လွန်သဗျ။ ဟီး ဟီး……။
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လမ်းကြောင်းကို တွေးမိပါတယ်။ ဦးဏှောက်တော့ကောင်းတယ်။ ဦးဏှောက်တွေကို (Master Brain) တွေကို ၀ယ်ယူထားတာကြောင့်။
ကြိုဆိုပါတယ်….အကိုကြီး nigimi77 က အသုံးအနှုံး လေးတွေ အိစက် ညက်ညောပျော့ပြောင်း တမျိုးတော့
တော့တန်း စာရင်းဝင်များနဲ့ စာရင်းဝင်ဟောင်းများ နာမည်ကို စာရင်းပြုစုပြီး ပိုစ်တခု တင်ပေးပါလား။ သင်တန်းတက်ရင် အောင်လက်မှတ်ပေးသလိုမျိုးပေါ့.. တော့တန်း စာရင်းဝင်ဘူးသူတွေ နာမည်လည်း ဖော်ပြပေးတော့ အားလုံး သိရတာပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ရွာကို ချစ်လဲ ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် သိစေတာပေါ့။ ဖြစ်နိင်ရင် လုပ်ပေးနော်။ သဂျီး.. ဒိုးနပ်မုန့် အခု ဖုတ်ထားလို့.. ကျက်ရင် ကျွှေးမယ်နော်။ ဟီးဟီး. စိတ်ကူး ပြောကြည့်တာ အဆင်ပြေ မှ လုပ်ပါ။
ဒါဆို ဆူးရေ ဆိုက်စတင်တည်ထောင်ထဲက စာရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးရမှာပေါ့နော်….
ဟုတ်တယ်မမ ဆူး ပြောသလိုပဲ
နိုးနိုး.. top100 လောက်လုပ်ပေးပါသဂျီး။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့နာမည်ပါတဲ့အထိပေါ့။
သဂျီး ဆိုက်က ကျန်းမာရေး မကောင်း ဖြစ်ချင် ပြန်ပြီလား မသိဘူး။
ကြည့်ရတာ .. အန်ဒါအတက်ခ်ဖြစ်နေပုံရတယ်…။
Donate ကို နှိပ်လိုက်ရင်..ဘယ်ထဲရောက်သွားသလဲရှင့်။
သူကြီးရေ… ဒီနေ့အချိန်ထိ ပွိုင့် တစ်သိန်းပြည့်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ ဗျို့
သဂျီးက အဝေးကနေ ပြုံးပြ မဲ့ပြ လုပ်ပြီး သတ်လိုက်တဲ့.. သိချင်လို့ မေးတာ ကြောလည်း ကြောဝူး။